Virtual Hofisi Zvirongwa, inozivikanwawo seCorporate Headquarters Programs
Iyo hofisi chaiyo ibasa rinopa kero yekutumira uye mafoni ekugamuchira mabasa. Iyo kambani inoshandisa iyo sevhisi haagari muhofisi. Kazhinji makambani akati wandei anoshandisa iyo chaiyo hofisi kero. Nekuda kweizvozvo, sevhisi ino inopa yakakura kuchengetedza pamusoro pechinyakare hofisi nzvimbo uye yekugamuchira mutengo. Uye zvakare, vanhu vazhinji vanoshandisa seti iyi yekuvanzika kwemari. Ndokunge, saka zvinhu zvakaiswa mubatanidzwa kana LLC hazvisungirwe kukero yemuridzi, mukuru kana director.
Iyo Virtual Hofisi Chirongwa iri inowanikwa mune dzese 50 US nyika uye nyika zhinji dzekunze.
Vanosarudza Maofficial uye Vanotungamira
Nominee basa rekuvanzika ndipo panobatana mumwe wevanobatana navo muzvinyorwa zveveruzhinji sevatariri vako nevatungamiriri veboka rako kana maneja weDhipatimendi rako. Iwe unonyanya kutonga nekubata kodzero dzese dzekuvhota, nekuve nekambani. Nekusajeka, iwe une zvinyorwa zviri mukati mako zvinoratidza kuti kambani ndeyako. Kunyangwe, ipapo mumwe munhu anotarisa kukambani yako kana zita rako mune zvinyorwa zveveruzhinji, ivo havawone kushamwaridzana pakati pako nekambani yako. Naizvozvo, iwe unogona kuve nehombe hombe kubhengi kana brokerage muzita rako rekambani. Maziso akatsvuka haangazviwani zviri nyore.
Mukuwedzera, inogona kuva yako chaiyo yezvivakwa iwe isingazivikanwe. Saka, chii chinonzwikwa neenzara inomiririra mupi wemitero kana uchitsvaga pfuma yako? Zvishoma kusvika pasina. Iwe une mari yakakwana here uye zvimwe zvinhu zvakavhenekwa kuti zvikumiririre iwe unofanirwa? Sezvingabvira kwete, kana iwe uine yako pfuma mune akakodzera maturusi zvishandiso.
Virtual Hofisi Kubatsira
Pane zvakawanda zvakanaka zvakaberekerwa kana iwe sanganisira kana kuumba LLC. Izvi zvinonyanya kuitika kana iwe ukagadzira Nevada kana Wyoming LLC ine bank account. Izvi zvinodaro nekuti mitemo yekudzivirira yefa munzvimbo idzi mbiri inodarika dzimwe nyika. Kune mamwe makuru eidziviriro epfuma mukutonga kwemhiri kwemhiri, senge saNevis LLC. Pamusoro pazvose, tora mukana wemirairo iyo inochengetedza vanogovana, mapurisa nevatungamiriri. Nevada naWyoming ndivo vakasimba muUS. Uyezve, hapana yemakambani mapato emari mitero mune chero eizvi nyika. Nevis ndiye akasimba pane nyika yose. Saizvozvo, hapana mitero yemari mune ino inozivikanwa nzvimbo. Zvino, vanhu vemuUS vano mutero pamari yepasi rose, saka zvinoreva kuti hapana mamwe mafomu emutero ekuisa faira munzvimbo iyoyo.
Vanhu vazhinji vanoshandisa Nevada, Wyoming kana makambani ekunze nekuda kwezvikonzero zvekutanga:
· Ere yekushandisa bhizinesi munzvimbo yavo yekugara, kana,
Kuchengetedza zvivakwa zvako uye kuwedzera zvakavanzika uye zvakavanzika
Izvi zviviri zvezvikonzero izvi zvinogona kuratidza zvakanyanya kubatsira kune rako bhizinesi. Asi pane matanho aunotora kuti uve nechokwadi chekuti unoona mabhenefiti aunotarisira. Uyezve, iwe unogona kuwedzera iwo mabhenefiti nekuwedzera mazita ekushandura kuti uwedzere kuvanzika kwako sezvatakurukura pamusoro apa.
Nevada kana Wyoming Corporation muMusha Wako Imba
A Corporation inoumbwa mune chero ipi ye50 inoti inogona kuita bhizinesi mumatunhu ese. Semuenzaniso, ngatiti unogara muCalifornia uye une kambani yemarori. Iwe unoda kudzikisa mhosva yako yemutero uye upe zvakare dziviriro kune yako pfuma. Saka, iwe unogadzira Nevada Corporation yekambani yako yemarori, wozonyoresa kuCalifornia seboka rekune dzimwe nyika. Izvi zvinozivikanwa se "hunhu hwekunze." Nyika yeCalifornia inopa mutero chero mari inotorwa kubva munyika iyoyo.
Nekudaro, yako kambani inogona kuramba ichinakidzwa nemutero-isina mamiriro muNevada pane chero mari inotorwa mune iyoyo mamiriro. Izvi zvakafanana zvinoenda kune chero imwe nyika kwaakashanda yaive nemitemo yakafanana-isina mutero, kana isina "yekumwe hunhu" zvinodiwa. Kuti iwe unakirwe nezvinhu izvi zvemutero, zvisinei, zvinofanirwa kunge iri bhizinesi "rekugara". Zvinodiwa isu zvatsanangurwa pazasi ndizvo zvichaona izvi.
Wedzera Yakavanzika uye Chengetedza Assets
Nevada Corporations inopa yakavanzika isingaenzaniswi uye yakanakisa kuchengetedza kwezvinhu kune vatungamiriri, vatariri, uye stockholders (varidzi). Nechirevo, hapana stockholders, kana maofficial / directorors vanogona kupihwa mhosva kune chero zvikwereti kana zvikwereti zvinowanikwa nekambani yeNevada. Kana mazita stockholder inyaya yeruzhinji rekodhi. Chete Directors uye Akanyoreswa Magengenyi inyaya yeruzhinji rekodhi. Mumwe anogona kutoronga zvinzvimbo izvi muchivande. Nekushandisa madometa anosarudzwa, semuenzaniso, munhu anogona kuvandudza kuvanzika uye kuvanzika kwe "vechokwadi" varidzi vekambani. Uchishandisa yedu yakavimbika Shumiro Service, unogona kuvimbiswa kuti zita rako rinozochengetwa chakavanzika kumeso ekupemberera ekuona.
Semuenzaniso, unogona kubhadhara rimwe bhizinesi rako uye purofiti purofiti yakananga kuNevada Corporation yako. Izvi zvinogona kuwedzera kuvanzika uye kuchengetedza zvinhu. Mumwe anogona kuita izvi nekutanga Corporation mumusha mako mamiriro, ipapo imwe Corporation muNevada. Iyo kambani yeNevada, zvakare, inogona kushandiswa kutapura uye kugamuchira mari kubva kune yako-state Corporation. Saka, bhizinesi raunoshanda mune rako rekumusha state rinogona kuhodha yako kambani muNevada. Izvi zvinogona kuva zvinhu zvakadai seku maneja, kubvunza, kana kutengesa zvinhu zvebhizimusi, nezvimwe.
Inosangana neicho Chekuvapo Kwehunhu Chinodiwa
Nekuti iwe unenge wave wakanyatsogadzira yako kambani seyekugara Corporation muNevada (uchishandisa yedu iri nyore, inoshanda Nevada Hofisi Chirongwa kana Nevada Virtual Hofisi Chirongwa), uye yakarongwa yekusarudzwa kweavo mazita ekugadzwa kuburikidza neNeminee Yakavanzika Service, yako Sangano yaizowana mari yayo zvine hungwaru uye nekuvanzika kwakazara. Iwe waizokwanisa kuzvibhadhara iwe pachako muhomwe kubva kuNevada Corporation. Nekuda kwekuti mutero wemubatanidzwa weC Corporation wakaderera zvakanyanya pamutengo wega wega mumabhakiti ese emitero, iwe unogona kuziva kumwe kuchengetedza mutero. (Zvakare, kana kambani inoshanda munyika ine mutero wemari yemubhadharo, inofanirwa kutevedzera mitemo yemutero yenyika inoshanda mairi. Izvi hazvingabatanidzi mibairo yemutero isina mari kana ichingoshanda muNevada chete. Tarisa nemutero uneruzivo. chipangamazano).
Mumwe muenzaniso: Kana uine mari yakakura yekutengesa masheya, unogona kugadzira Nevada Limited Liability Company ("LLC") kubata idzi matura. Iwe unogona ipapo kuronga kuti yako Corporation muNevada itarise mari idzi, uye kubhadhara "kune manejimendi services anopihwa" mari kune yako kambani muNevada kubva kune izvi zvivakwa kuburikidza neAID. Panguva yose iyi zita rako harisi kunyoresa seunowana zvese izvi zvinopfuura, uye kudhura mutero, mari.
Chii chinonzi Virtual Hofisi Chirongwa?
Kuti ubatsirwe nekuvanzika kwakanyanya kwemari, chisungo chidiki, uye kuchengetedzwa kwezvinhu zvakapihwa Nevada Corporation yako, inofanirwa kuzadzisa zvimwe zve "kugara". Iwe unofanirwa kukwanisa kuratidza zvakakwana kuti yako bhizinesi ndeyechokwadi, inoshanda bhizinesi muNevada.
Kuti uite kudaro, inofanira kupfuura aya mana akaedzwa miyedzo:
Iyo kambani inofanirwa kunge iine Nevada kero yebhizinesi, ine mareti, kana zvinyorwa zvinotsigira seuchapupu.
Inoda nhamba yebhizinesi reNevada. 
Inofanirwa kuve neina rebhizinesi reNevada
Iyo Corporation kana LLC inofanirwa kuve neNevada Bank account yeimwe mhando (kutarisa, account yebroker, nezvimwewo).
Virtual Hofisi Kukwanisisika
Sezvinoratidzwa nezvidikanwa izvi, iri nyore Bhokisi Bhosi kana basa rekupindura haringakwani. Kuti upfuure muster, panofanirwa kuve neyekugara, yekufema hofisi ichitsigira Nevada Corporation yako. Rutivi rwekuvhura uye ipapo kusimudzira hofisi nderekuti inogona kudhura zvakanyanya, kunyanya kana iyo Corporation muNevada iri yekuwedzera mutero wako wekudzikisa mutero uye iwe uri kutsvaga kuwedzera mari yako mukushambadzira kwako. Kana uchizarura hofisi, iwe unofanirwa kukanzura rendi, vashandi, zvinoshandiswa, nhare uye mabasa e data, mitero yebasa, kupa, uye inishuwarenzi. Ngatiise izvi mu "mutengo wepamwedzi" maonero:
Rent Office $1500
Runhare & Dhata $100
Mitero Yebasa $300
Mari idzi dzakawedzera nekukasira kune tune ye $ 6,00 pamwedzi. Muchokwadi, idzi ndedzipi mitengo yekufungidzira, ine mikana chaiyo inogona kunge yakakwira zvakanyanya. Kawedzera nhamba iyi ne12, uye iwe unogona kuona kuti kunyangwe "hwaro hwekushandisa" hofisi hungabhadhara kambani yako $ 72,000 pagore.
Asi isu tine mhinduro inonzwisisika yekusangana nezvido zvako! Isu tinogona kuita zvese izvi zvekambani yako kutanga pane kungoita $ 995 kusvika $ 2,995 yegore rose, zvichienderana nepakeji yaunosarudza. Ne yedu Nevada kana Wyoming Office Program (inozivikanwawo seNevada kana Wyoming virtual hofisi chirongwa), tinogona kupa Corporate Corporate yako yakakodzera hofisi uye bhizinesi kero (inowanikwa nekugadzwa), inoshandirwa nevanhu vane chibvumirano munguva dzenzvimbo dzebhizimisi nguva zhinji, munhu mupenyu achipindura yako (yakagoverwa) bhizinesi nhare nhamba, yako yakasarudzika kutumira tsamba kutumira, uye kubatsirwa nekuvhurwa kwebhangi kana brokerge account. Isu tinopa sevhisi yakafanana munzvimbo zhinji dzegungwa.
Inosanganisirwa yedu Makambani Inopindirwa Nevada Corporation Hofisi Hofisi Chirongwa:
· Iyo chaiyo Nevada kero yemugwagwa - ine vashandi vane chibvumirano kubva ku8am kusvika 5pm
Pacific Nguva Muvhuro kusvika Chishanu.
· Mail kutumira basa yakagadzirirwa kune zvaunoda
· A Nevada yakagoverwa nhamba yefoni inopindurwa neyakagamuchirwa yekugamuchira
· Nhamba yefekodhi yeNevada
· Batsira kuvhura Nevada bank account kana uchida
· Rubatsiro kunyorera rezinesi rebhizinesi reNevada
· Rarama chibvumirano vashandi kukwazisa vako vanokufonera panguva dzebhizimisi maawa.
· Notary basa
· Sevhisi yebasa
Makambani Akafukidzwa Nevada Virtual Hofisi Chirongwa anozongoda iwe chete $ 110 pamwedzi kana iwe ukabhadhara pamwedzi-kusvika-mwedzi hwaro nekuzvipira kwegore rimwe, asi zvakare, unogona kutora mukana wedu we $ 325 mutengo wegore rekutanga. Iwe unobhadhara chete $ 995 yegore rose rebasa.
Kuchengetedza Pamusoro Peiyo Chairo Hofisi
Aya mapakeji anogona kukuchengetera zviuru zvemadhora mukushandisa mari, uchichengetedza zvese zvako zvakaoma-zvakawanikwa, uye zvawanikwa, kudzikiswa kwemitero.
Yedu Nevada Corporate Hofisi Chirongwa inosangana uye inogutsa zvese zviyero zvinodiwa kuti mugare mushe Nevada kushandira shanduro. Uyezve, aya masevhisi anoendeswa nenzira inoziva, ine hushamwari yehunyanzvi. Vane ruzivo vashandi vangave vachipa aya marudzi ebasa kwemakore anopfuura 30 kubata zviitiko zvako. Nekudaro, isu tinogona kupa chirongwa ichi pamutengo unokwezva uyu nekuda kwehuwandu hwepamusoro hwebhizinesi uye rinoshanda sangano.
Nhamba iri pane ino peji kana fomu yakapihwa pamusoro inogona kushandiswa kuti uwane imwe ruzivo rwezvakanakisa TAX SAVINGS uye PRIVACY sarudzo dzinowanikwa neCompanies Yako Yakanangana Virtual Hofisi Chirongwa.